Fakana an-keriny :: Nifampitifitra ireo jiolahy sy ny zandary • AoRaha
Fakana an-keriny Nifampitifitra ireo jiolahy sy ny zandary
Nahery vaika ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy miisa enina, naka an-keriny olona roa, tany Ankaboka-Malaimbandy sy ny mpitandro filaminana, afak’omaly. Maty tamin’izany fifandonana izany ny iray tamin’ireo jiolahy. Azo sambo-belona kosa ny iray hafa.
Votsotra teo am-pelan-tanan’ireo jiolahy iretsy olona roa, sady tsy nisy naratra. Nisy lehilahy iray hafa voalaza fa mpiray tsikombakomba tamin’izy ireo no voasambotra ihany koa.
Nalain’ireo jiolahy mpaka an-keriny ireo olona roa, tany Ankaboka, tamin’ny 9 septambra alina tokony tamin’ny 7 ora mahery. Nitondra basy lava maromaro izy ireo. Nanenjika ireto jiolahy ny zandary avy any Ankilimianga miaraka amin’ny fokonolona. Ora maro taorian’ny dia an-tongotra no nifankatratra ny an-daniny sy ny an-kilany. Nisy ny fifampitifirana nandritra ny minitra maro, araka ny loharanom-baovao avy amin’ireo mpitandro filaminana.
“Rehefa nojerena ny teo amin’ny toerana nisian’ny fifampitifirana dia ny iray tamin’ireo jiolahy no namoy ny ainy. Tsy afa-nitsoaka intsony ny iray hafa mbola velona ka noraisim-potsiny. Mbola manenjika sy mikaroka an’ireo efatra hafa ireo zandary sasany any an-toerana hatramin’izao”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Firehetana goavana Lehilahy lehibe maty kila tao an-trano
Fahafatesana mampiahiahy Mpitondra môtô hita faty teo amin’ny arabe
Fanafihana mitam-piadina Ben’ny tanàna maty voatifitra teo ambony fandriana
Faharendrehana :: Telo lahy iray tampo niara-maty an-drano
Fodiamandrin’ny filohan’ny FLM Voalevina tetsy Ambatovinaky ny pasitera Rakotonirina David